June 21, 2021 - Cele Fans
June 21, 2021 Cele Fans Comments Off on အွန်လိုင်းပေါ်အလှပုံ_ဖုန်းအမှတ်တင်သူမိန်းမငယ်များဆင်ခြင်နိုင်ရန်…..သတိ
၁၅နှစ်သမီးကိုမျိုးစုံခြိမ်းခြောက်ပြီးခေါ်ဆောင်ကာဓမ္မတာနှင့်ဆန့်ကျင်ပြီးအကြိမ်ကြိမ်သားမယားပြုကျင့်သူနှင့်ပါဝင်သူတို့ကိုအရေးယူ အမှုဖြစ်စဉ်မှာ၁၃.၆.၂၀၂၁ရက်ည၇နာရီအချိန်ခန့်ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊အရှေ့ပိုင်းခရိုင်၊ဒဂုံ(ဆိပ်ကမ်း)မြို့မရဲစခန်းတွင်ဒုရဲမှုး…..တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ်ဒေါ်……(၄၈)နှစ်၊မှီခို၊…..၊……လမ်း၊…..ရပ်ကွက်၊သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်နေသူက၎င်းသည် ၁၁.၆.၂၀၂၁ရက်မွန်းတည့်၁၂နာရီအချိန်သမီးဖြစ်သူမ……(၁၅နှစ်၇လ)၊ဈေးရောင်းသူသည်ဖခင်ဖြစ်သူအလုပ်ရှိရာတောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်(……ကားဂိတ် )သို့ လိုက်သွားမည်ဟု ပြောကာ နေအိမ်မှ ထွက်သွားရာပြန်လည်ရောက်ရှိလာခြင်းမရှိသဖြင့် ၁၂.၆.၂၀၂၁ရက်နေ့တွင်သုဝဏ္ဏနယ်မြေရဲစခန်းသို့လူပျောက်အမှတ်စဉ်(၉/၂၀၂၁)ဖြင့်တိုင်တန်းပြီးရှာဖွေခဲ့ကြောင်း၊၁၂.၆.၂၀၂၁ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းတွင်သမီးဖြစ်သူမ……ကိုင်ဆောင်သည့်၀၉၄၀…….. ဖုန်းဖြင့်ဒေါ်…….၏သူငယ်ချင်းဖြစ်သူမ……၏ လက်ကိုင်ဖုန်းအမှတ် ၀၉၅၄…….. သို့ Message ဝင်လာပြီး မ….အား“ပုဒ်မ၅၀၅ကဖြင့်အမှုဖွင့်ထားကြောင်းနှင့်လွတ်မြောက်ရန်ငွေ(၁၃)သိန်းကျပ်ပေးရမည်”စသည့်စာသားများပေးပို့လာပြီးငွေတောင်းခံကြောင်း၊မိခင်ဒေါ်…….မှငွေလွှဲပေးခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်း၊ ၁၃.၆.၂၀၂၁ရက် နေ့တွင် “မာမီသမီးကိုယုဇန C7လမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၃၅) အပေါ်ဆုံးထပ်ယာဘက်တိုက်ကိုအမြန်ဆုံးလာခေါ်ပေးပါလူ၁၅ယောက်နဲ့လာပေးပါမဟုတ်ရင်သမီးအသတ်ခံရမှာ စာလုံးဝပြန်မပို့ပါနဲ့ သတ်လိမ့်မယ် မြန်မြန် လာပါ” ဟု စာပို့လာ၍ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်ပူးပေါင်းပြီးသွားရောက်ရှာဖွေခဲ့ရာအဆိုပါအခန်းတွင်မတွေ့ရှိသဖြင့်ဆက်လက်ရှာဖွေနေစဉ် သမီးဖြစ်သူ မ……. ထွက်လာသည် ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊(….)ရပ်ကွက်၊ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်၊ အေ(…)လမ်းတိုက်(….)၊ အခန်း(….)သို့ […]